Jokes Archives - Page5of 30 - Khoyaa
आगो लाग्यो क गर्ने होला ?
शेरे एकदम अल्छी थियो, उ दमकल अफिसमा काम गर्थ्यो । एक दिन अफिसमा फोन आएछ, मानिस : “दाइ, दाइ, मेरो घरमा आगो लाग्यो, छिटो आउनुहोस न ।” शेरे : पानी हाल्नुस न पानी । मानिस : पानी हालेको तर निभ्दै निभेन भनेको, छिटो आउनुस न । शेरे : उसो भए …
हाकु र हाकु को छोरा
हाकु आफ्नो छोरा सँग :- ओए साले गधा, भाते , चोर्, हैन तैले यो कस्तो सलाई ल्याको ह ? एउटा नि बल्दैन त ? ? हाकु को छोरा :- ल बाऊ ले पनि कस्तो कुरा गरेको होला, अगि बिहान मैले किन्ने बेलामा त सबै एक एक गरी चेक गरी ल्याको …
हाकु काले लण्डनमा
एक दिन हाकु काले लण्डन गएको थियो अनी हाकुले डब्बल बस म चाडयो र त्यो बसको स्टाफले उस्लाई माथिको तल्ला मा बस्न लगायो… हाकु माथि गयो र एकैछिन मा फर्कियो र भन्न थाल्यो….. “माम पाखा तिमीहरुले मलाई मार्ने मास्टर प्लान बनाको…… साला माथि त कुनै ड्राइभर नै छैन “
शेरे र म्याडम class maa
म्याडम : मैले अहिले भर्खर पढ्आएको कुरा कस्ले बुझेन ? शेरे : म्याडम मैले बुझिन् म्याडम : भनेको बेला मज्जाले सुन्नु पर्छ नि । शेरे (रिसाउदै): मामपाखा, तेरो बाउको खप्पर !!! म्याडम : के रे ? शेरे : भनेको बेला मज्जाले सुन्नु पर्छ नि, मज्जाले !!! xd xd xd
शेरे र मुन्द्रेको जुक्ती
शेरे मुन्द्रे दिल्ली जादै थिए । गोरखपुरमा गएर रातिको रेलमा चढेछन । जेनेरल डिब्बामा बसेको हुँदा एक भिड थियो । उनिहरुले सिट पाएनन । अनि उनिहरुले एउटा जुक्ती निकालेछन । उनिहरु चिच्याएछन्:” साँप्, साँप ……..” त्यस पछी त्यहाँका सबै मान्छे भागेछन । अनि दुबै जना मज्जले सिटमा सुतेछन र निदाएछन …
२ – ३ वटा बिरालो
सर: ल म तलाई एउटा प्रश्न सोध्छु । मैले तलाई २ वटा बिरालो दिएँ । फेरी ३ वटा बिरालो दिएँ । अब कती वटा भयो ? ? शेरेको छोरो : ६ वटा । सर : तैले कुरै बुझेनस फेरी राम्रो सँग सुन्, मैले तलाई २ वटा बिरालो दिएँ । फेरी …